Hariirichi haala qoratameen cimee ittifufuu qaba
Hariirichi haala qoratameen cimee ittifufuu qaba Featured
Jilli qondaaltota Mootummaa Eertiraa wayita buufata xiyyaaraa addunyaa Boolee gahu, Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmadiin simatamaniiru. Jilli kun biyyee Itoophiyaa waggoota 20 ol dharraa'anirra ejjechuutti waan boqotan fakkaatu.
Baatiiwwan muuraasaa as erga Doktar Abiyyi Ministira Muummee ta'anii muudamanii, haala hariiroo Ertiraa kana dabaltee siyaasni biyyattii kallattiiwwan garagaraatiin jijjiirama hedduufi daandiilee dimokraasii dhugaatti qajeelchan galmeessaa jirti.
Tattaaffiin taasifamaa jiru kun ummata biyyattii darbees biyyoota ollaa jijjiirama arguuf dharra'aa tureef itti quufiinsa fidaa jira. Haaluma kanaan, lammiileen biyyattis gammachuusaa ibsatee toora Doktar Abiyyi eegalan utubuuf akka cinaa jiru Sanbata darbe hoomaan ba'e deeggarsasaa ibseera.
Hariiroon Eertiraafi Itoophiyaa waggoota 20 oliif, “Lolli utuu hinjiraatin nagaas utuu hinqabatin” addaan citee ture walitti deebisuuf koreen raawwachiiftuu hojii Adda Dimokraatawaa Warraqsa Ummatoota Itoophiyaa murtee dabarseen waliigaltee Aljarsi hojiirra oolchuufi daangaa Komishiniin Daangaa Dhaabbata Mootummoota Walta'anii murteesse kan fudhatu ta'uu beeksise. Kunis dhagaa gargar cabe walitti deebisuuf murtee bu'uuraa ta'ee fudhatame. Tibba darbes ministirichi muummee paarlaamaarratti dhiyaatanii wayita ibsa kennanitti, daangaaleen daangeffaman kan koloneeffattoonni sararaniifi namtolchee ta'uu eeruun ummataafi ummata, biyyaafi biyya akka addaan qoqqoode ibsan. Eertiraa waliinis waggoota 20 oliif wareegama hinbarbaachifne kaffalamaa akka turedha kan ibsan.
Murteen Itoophiyaa kunis Pirizidaantii Ertiraa Isaayyaas Afawrqiin fudhatamee, isaanis jila olaanaa tokko gara Itoophiyaatti akka ergan beeksisan. Jilli kunis Kibxata darbe Finfinnee galeera. Jilli Gorsaa Pirizidaanti Isaayyaasiifi Ittigaafatamaa Dhimmoota Siyaasaa Obbo Yamaanee Gabra'aabiifi Ministiraa Dhimma Alaa Ertiraa, Obbo Usmaan Saalaatiin kan hogganameedha.
Galgala Kibxataas Masaraa Mootummaa Biyyaalessaatti Doktar Abiyyi qondaaltota kanneeniif affeerraa laaqanaa taasisaniiru. Afeerraa kanarrattis haasawa taasisaniin, lammiileen Itoophiyaa Eertiraa adeemuun, lammiileen Eertiraas Itoophiyaa dhufuun akka daaw'aniif gamanumaa qoophaa'uu akka qaban himan.
Daandiin lolaa akka hinbaafneefi yaalii lolaa kanaan dura taasifame gama lamaanuuf bu'aan akka hinargamsiifne eeranii, amma garuu lammiilee Itoophiyaarraa kan bareedu jaalala qofa jedhan.
Kanarratti, haala akkamiin Tigiraay Kaabaafi Eertiraa Kibbaa daangaa tokko malee waliin misoomsuun haala danda'amurratti, akkasumas rakkoorratti walii birmachuun walbiraa dhaachuun haala danda'amurratti hojjechuun faayida qabeessa akka ta'eedha kan ibsan.
Araaraaf yookaan jalalaaf haa hafuutii lolaafuu gatii guddaa kaffalameera waan ta'eef, gama Itoophiyaan wareegama araaraaf barbaachisuu hundaa kaffaluun obbolootaa keenyaa lammiilee Eertiraa waliin idaa'amuun waliin guddachuuf fedhii olaanaa kan qabna ta'uu tuqan.
Nagaan Eertiraaf, Itoophiyaaf, Somaaleef, Sudaaniif erga jedhanii, fuulli Doktar Abiyyi seequun faayame, lammiileen Itoophiyaafi Eertiraa sirba waggaa haaraa waliin sirbuuf hawwiidhaan waan eegnuuf daddaftanii akka nuuf dhuftan jechuun gaafatan. Dhumarrattis naannawa Gaanfa Afrikaa afaan lolaarraa gara afaan jaalalaatti akka ceetu hawwiisaanii ibsanii, “ajjeechaan kisaaraadha; jaalalli garuu ni ceesisaa” jechuun dubbiisaanii xumuran.
Walumaagalattii, daandiin eegalame dhugumaan daandii jaalalaa malee, daandiin lolaa akka hinbarbaachifne kan akeekuudha. Bara walwaraanni yaadaa duubatti hafaa ta'aa dhufetti lola yaaduun, hinbarbaachisu. Kanaaf ammoo adeemsi jaalalaafi nageenyaa Itoophiyaan eegalte kun fakkeenyaa haqaati. Kanaaf, gaafa lolli dhaabbatee dhagaan gargar cabdellee araaraafi jaalalaaf walitti deebiti. Kan Itoophiyaafi Eertiraan itti jiranis kana kan argisiisu waan ta'eef hariirichi haala bilchinaafi qorannoorratti hundaa'een lafa qabatee akka raawwatamuuf xiyyeeffannaan irratti hojjetamuu qaba.
Torban kana/This_Week 4920
Guyyaa mara/All_Days 1642515